नेपाल आज | माग्ने बुढालाई धुरुक्कै रुवाएका बल्छी ध्रुवे (भिडियाेसहित)
हाम्रो पात्रो विज्ञापन
कभर स्टोरी भिडियो कला साहित्य
माग्ने बुढालाई धुरुक्कै रुवाएका बल्छी ध्रुवे (भिडियाेसहित)
नाम बल्छी ध्रुवे, माछा कहिले पर्ने हाेला बल्छीमा ?
सोमबार, ०१ असोज २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज
काठमाडौं । नेपालीमा एउटा उखान नै छ, ‘जुन गोरुको सिङ छैन उसको नाम तीखे ।’ मेरी बास्सै हाँस्य टेलिशृंखलाबाट चर्चा कमाएका बल्छी ध्रुबेलाई यो उखान ठ्याक्कै मिल्छ । उनले जीवनमा आजसम्म पनि माछा मारेका छैनन् तर उनकै नाम बल्छी ! वास्तविक जीवनमा न उनलाई माछा मार्न आयो न उनले सिके नै । तर बल्छी ध्रुबेको नामले चर्चाको शिखरमा पुगेका मरिचमान श्रेष्ठलाई पछिल्लो समय उनको वास्तविक नामले कमैले मात्र चिन्छन् । कलाकारिताको सुरुवाती दिनहरूमा उनले धेरै संघर्ष गरे । अहिले उनी मेरी बास्सैको कथा लेखक भइसकेका छन् ।
मरिचमान भन्छन् ‘स्क्रिप्ट लेख्नु भनेको फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै हो । पछिल्लो समय फिल्म हिरो हिरोइनको कारणले चल्छ भन्ने मान्यता पनि छ । तर यो कुरामा म सहमत छैन । फिल्म कुनै हिरो या हिरोइनको कारणले चल्ने होइन फिल्म चल्नलाई त्यसमा गुदी हुनुपर्छ र त्यो गुदी भनेको स्क्रिप्ट हो ।’
गोर्खा जिल्लामा जन्मेका मरिचमानले मेरी बास्सैमा उटपट्याङ काम गर्ने गरिब गाउँले केटाको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । उनको भूमिका र वास्तविक जीवनले पनि ठ्याक्कै मेल खाने रहेछ । खासमा श्रेष्ठको बाल्यकाल पनि उटपट्याङ काम गरेर नै बित्यो । घरमा काम धेरै हुन्थ्यो । विशेष गरेर उनको काम बाख्रा चराउने, बाख्रालाई घाँस काट्ने हुन्थ्यो । उनले घरको काममा अलि ठगी गर्थे । घाँस काट्न जान मन नलागेको समयमा उनी हँसिया लुकाउँथे । यतिसम्म कि, कहिलेकाहीँ त आफैँ लुकेर पनि काम गर्न बाट भाग्थे उनी ।
सानो हुँदा बल्छीले चोरी गरेका घटना पनि रमाइला छन् । उनको गाउँमा बत्तीको पैसा बल्छीका बुबाले उठाउँथे । उठेको पैसा बुबाले बल्छीकी आमालाई राख्न दिन्थे । आमाले सिरानमुनि राखेको पैसा चोर्थे उनी । त्यहाँबाट दस, बीस, सय, दुुई सय रुपैयाँ चोरेकै कारणले उनका बुबाआमाबीच झगडा पनि हुन्थ्यो । पछि बुबाआमाले पैसा चोरेको पत्ता लागेपछि मार कुटाइ खाए बल्छीले । अहिले मेरी बास्सैको स्क्रिप्ट लेख्ने काममा ती बाल्यकालको भोगाइले धेरै सघाउ पुगेको छ उनलाई ।
तिनै किस्साहरूलाई जोडेर उनले अहिले आफ्नो बाल्यकाललाई मेरी बास्सैको स्क्रिप्ट लेखनमा उतार्ने प्रयास पनि गर्छन् । स्क्रिप्ट लेख्दा आफ्नै गाउँ समाजका भोगाइ, समाजमा हुने घट्ना, गाउँलेले भोग्नु परेको सास्तीलाई विषयवस्तु बनाउने भएकाले आफ्नो अधिकांश भोगाइहरू स्क्रिप्टमा घुसेको उनी बताउँछन् । मरिचमानले आफ्नो कलाकारिताको जन्मदाता केदार घिमिरेलाई मान्छन् । उनी भन्छन्, ‘जसले आफूलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो उहाँहरूले नै अहिले मेरी बास्सै छोडेर गएदेखि मेरी बास्सै एउटा बाबुआमाबिनाको घर जस्तै भएको छ । अहिले हामीले जसोतसो काम चलाए तापनि उहाँहरूको अभाव खट्किरहेको छ । दर्शकहरूले पनि अझै सीताराम दाइ र केदार दाइलाई मेरी बास्सैमा देख्न चाहनु हुन्छ ।’
‘मेरी बास्सै’ मा काम गर्नलाई उनलाई त्यत्ति सजिलो थिएन । सुरुवाती दिनमा उनले मेरी बास्सैमा आउनलाई केदार घिमिरेसँग मरिहत्ते नै गरेका थिए । केदार घिमिरेलाई धुरुक्कै रुवाएपछि उनले मेरी बास्सैमा काम गर्ने मौका पाए । उनले मेरी बास्सैमा काम गरेको लामो समय पछि उनले बल्छी ध्रुबेको भूमिका पाए । जसलाई दर्शकहरूले अहिलेसम्म मन पराइदिएका छन् ।
उनी शास्त्रीय संगीतका विद्यार्थी पनि हुन् । उनी दर्शकलाई हसाउनेमात्र होइन मीठो गीत पनि गाउँछन् । संगीतमा रुचि भए पनि व्यस्तताका कारणले उनले संगीतमा भने त्यति साधना गर्न सकेका छैनन् । तर पनि उनी कालाकारिताको साथै संगीतलाई पनि अगाडि लैजाने सोचमा छन् ।
उनले गीतबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छन् । दर्शकहरूले उनलाई तिमीले स्टेजबाट मान्छेलाई हसाउने मात्र होइन त्यति नै मीठो गीत पनि गाउन सक्ने रहेछु भन्ने गर्छन् । त्यसलाई पनि निरन्तरता देउ भन्ने गर्छन् । दर्शकहरूकोे त्यो मायाले गर्दा उनलाई अझ नयाँ ऊर्जा मिलेको उनी बताउँछन् र सांगीतिक क्षेत्रमापनि केही गर्न सक्छु भन्ने साहस गरेका छन् ।
बल्छी ध्रुबे मरिचमान श्रेष्ठ
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा ब्रम्हलुट ( भिडियोसहित)
सोमबार, १२ फागुन २०७६
विद्यार्थीलाई सिकाउने होइन सिक्न दिनुपर्छ ( भिडियोसहित)
‘एमसीसी’ को खारेजी र ‘बीआरआई’ को स्वीकृति ( भिडियोसहित)
आइतबार, ११ फागुन २०७६
गगनचुम्बी गोकुलधाम घूमेर हेर्दा
जंगली बँदेल मार्न किसानले पाए अनुमति!
बिहिबार, २३ माघ २०७६
त्यो बोली, यो ओली
आइतबार, १९ माघ २०७६
सभामुखको निर्विरोध चयन सार्वभौम संसदमाथि नै प्रश्न (भिडियोसहित)
शुक्रबार, १७ माघ २०७६
नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति क कसले प्रयोग गरे ? (पूर्ण पाठसहित)
प्रभु साहमाथि प्रतिशोधी डण्डा
कम्युनिष्ट सरकारप्रति गर्जिदैँ गगनले मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा
श्रममन्त्री यादव आज मौरिसस जाँदै
एमबिए पढ्न चाहनेलाई चौधरी ग्रुपको प्रस्तावः पढाइ सक्किएपछि जागिरकाे पनि अवसर
सुजुकी एस्प्रेस्सो : यस्ता छन् विशेषता (भिडियोसहित)